ट्रेन यात्रा जर्मनी अभिलेखागार | पृष्ठ9को 11 | एक ट्रेन सेव
पढ्ने समय:4मिनेट युरोप मा ऐतिहासिक होटल एक दुर्लभ दृष्टि छैन, विशेष गरी एक धनी इतिहास संग ठूलो शहर मा. पेरिस, लन्डन, रोम, म्यूनिख, भियना - यी शहर को सबै प्रस्ताव राम्रो ठाउँमा छ. केही परम्परागत लक्जरी चाहने पर्यटकहरूलाई ठाउँ भेट्टाउन कुनै कठिनाई हुनेछैन…
पढ्ने समय:4मिनेट युरोप मा एक छुट्टी योजना कहिले काँही एक समय लाग्न सक्छ. को सावधान यात्री लागि, यो यात्रा को रसद अनुसन्धान र रहन ठाउँ छनोट गर्न एक महत्वपूर्ण समय लगानी छ. तपाईं सबै-समावेशी वा जानु पर्छ? तपाईं त्यहाँ कसरी पुग्नुहुन्छ, द्वारा…
पढ्ने समय:4मिनेट धेरै बियर मन पराउने यात्रुहरूसँग म्युनिकमा गर्नु पर्ने तिनीहरूको सूचीमा उच्च छ. यो एक Oktoberfest पनि त्यहाँ भनेर दिइएको गर्नुपर्छ, तर Nockherberg Starkbierfest – म्यूनिख बलियो बियर महोत्सव अतिरिक्त केही ल्याउँछ. कुनै, छैन भीडलाई. तपाईं आधा धेरै अनुभव छौँ. तर बियर डबल छ…
पढ्ने समय:3मिनेट त्यहाँ केही अविश्वसनीय एक रेल विन्डो बाहिर नरहन मनमनै बारेमा पूरा छ, तपाईंलाई लाग्छ कि छैन? त्यसैले, घनिष्ठ सुरक्षा frisks बारेमा भूल, तरल लागि स्पष्ट Ziplock बैग, शून्य गोपनीयता र शौचालय-कम busses. त्यहाँ डिसेम्बर मा रेल द्वारा भन्दा युरोप अन्वेषण गर्न कुनै राम्रो तरिका हो. यहाँ छन्…